कान्छीसग धुमधाम विवाह हुँदै थियो जब जेठी श्रीमती मण्डपमा आइपुगीन,,हेर्नुहोस के भयो?
घरमा जेठी श्रीमती हुँदाहुँदै कान्छी भित्र्याउन खोज्ने एक पुरुष विवाह मण्डपवाट लखेटिएका छन् । विवाह गर्दै गरेका ति पुरुषको यस अघि एउटा मात्र होइन दुईवटा विवाह भइसकेको बताएपछि खैलाबैला मच्चिएको थियो । कान्छी भित्र्याउने तयारीमा मण्डपमा नयाँ बेहुली संग बसेको बेलामा बेहुलाकी जेठी श्रीमतीको इन्ट्रि भयो । उनले ले नयाँ बेहुलीलाई उनका बेहुलाको पहिले नै एकजना होइन, दुईजनासँग विवाह भइसकेको जानकारी दिएपछि खैलाबैला मच्चियो ।
धोका दिएर विवाह गरेको थाहा पाएपछि नयाँ बेहुलीका आफन्तले नै उनलाई लछारपछार पारे र मण्डपवाट लखेटे । करिब ३३–३४ वर्षका आसिफ राफिक सिद्दीकी नयाँ बेहुलीका आफन्तले नै लखेटेका हुन् । यो घटना पाकिस्तानको हो । उनीबारे यस्तो जानकारी सार्वजनिक भएपछि रिसाएका भीडले उनले लगाएको सर्ट र पाइन्ट दुबै च्यातिदिएका छन् ।भीडबाट बच्नका लागि बस मुनी लुकेका बेहुलालाई पछि अपरिचित व्यक्तिले बचाएका छन् । पाकिस्तानमा बहुविवाह वैध भएपनि उनले छल गरेर विवाह गर्न लागेका थिए । एक व्यक्तिले चारजना श्रीमती राख्न पाउने धार्मीक र कानुनी अधिकार छ । तर त्यसका लागि पहिलो श्रीमतीको अनुमति भने लिनुपर्छ ।
घटनाको भिडियो पनि सोसल मिडियामा सार्वजनिक भएको छ । भिडियोमा देखिए अनुसार विवाह स्थलमा एकाएक एक रिसाएकी महिला प्रवेश भएपछि एक व्यक्तिले प्रश्न गर्छन्, ‘बहिनी के भयो ?’ मदिहा सिद्दीकी नामकी ती महिला सबै बेलिबिस्तार लगाएपछि त्यहाँको माहोल परिवर्तन हुन्छ । ‘उनी मेरा श्रीमान् हुन्, र उनी यो बच्चाको बुवा पनि हुन् । उनले मलाई आफू तीन दिनका लागि हैदराबाद जाने भनेर झुटो बोलेर यहाँ आएका हुन् उनले भिडियोमा भनेको सुन्न सकिन्छ । त्यसपछि उनलाई केही पर राखेर कुराकानी गरियो । त्यसपछि उनले नयाँ बेहुलीसँग पनि कुरा गरिन् । ‘तिमीलाई थाहा थिएन ? उनी मेरा श्रीमान् हुन् रु उनले यो अबोध बालकको पनि ख्याल गरेनन् ।’मदिहाका अनुसार उनले आसिफसँग सन् २०१६ मा विवाह गरेकी थिइन् । कराँची फेडरल उर्दू युनिभर्सिटीमा भेट भएपछि उनीहरुबीच प्रेम बसेको र विवाह गरेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
त्यसपछि आसिफले सन् २०१८ मा जेहरा असरफसँग गोप्य रुपमा दोस्रो विवाह गरेको समेत उनले नयाँ बेहुलीलाई बताइन् । श्रीमानकी नयाँ श्रीमतीको मेसेज देखेपछि उनले दोस्रो विवाह गरेको थाहा पाएको मदिहाले बताइन् । सुरुमा आफूले दोस्रो विवाह गरेको अस्विकार गरेपनि पछि श्रीमानले उक्त कुरा स्विकार गरेको मदिहाले जानकारी दिइन् । जेहराले नै उनलाई श्रीमानले तेस्रो विवाह गर्न लागेको भन्ने जानकारी दिएको उनले बताइन् ।